Wararkii Ugu danbeeyay ciyaarihi galabta ka dhacay Garowe | raascasayrmedia.com
← Ilko jiir PL waxay marti galinaysaa shirwayne lagu xasilinaayo Somaaliya
Mudaharaadyo maanta ka dhacay Somaliland oo sababay in la xiro Jaamacadda Hargeysa →
December 24, 2010 · 6:24 pm
Wararkii Ugu danbeeyay ciyaarihi galabta ka dhacay Garowe
Waxaa maanta ciyaaro aad u xiiso badani ka dhaceen garoonka kubadda cagta ee mire awaare staduim ee magaalada garowe , ciyaarahaas oo ay isku arkayeen gobolada kala ah Bakool vs Jubba Dhexe iyo Shabeelada Dhexe vs Bari.
Hadaba waxaa garoonka soo buux dhaafshay taageeroyaal badan oo sugayay ciyaarahan maanta dhacayay kuwaas oo xiiso gaara watay.
Ciyaartii Hore waxaa Fooda is daray Xulka Gobolka Bakool iyo Jubba dhexe waxaana ciyaartaas oo aad u kululeed oo dadkii daawanahay salka dhulka dhigi waayeen goolasha sida roobka loo dhalinayay owgeed.
Gobolk bakool ayaa waxaa u suurta gashay inay dhaliyaan 5 goal taas oo ka dhigaysa tirada ugu badan ciyaar 5 gool layska dhaliyo inta goobku socday, dhanka kale Kooxda Gobolka Jubba Dhexe ayaa iyagu iska soo xali kari waayay Goolasha laga dhaliyay balse la yimi 1 gool oo Qura.
Ciyaartaas ayaa waxaa guusha ku raadcaday Bakool 5 : 1 Jubba Dhexe .
Halka Ciyaarta Lasugayay inta Ciyaaraha Goboladu Bilaabmeen ba waa Gobolka Bari iyo Shabeelada dhexe oo loyaqaan (kismaayo) ayaa waxaa ciyaartaas laysku mariwaayay bareejo , Goolka ayaa waxaa ku hormaray gobolka Shabeelada Dhexe halka Gobolka Bari ay Goolka bareejada la yimaadeen .
labadan koox oo awal soo badiyay labadi ciyaarood ee hore ayaa waxaa ay lahaayeen min 6 dhibcood ayaa waxay hada midkiiba yeelanayaa 7 dhibcood Waxaana Group kan Hogaaminaya Gobolka bari oo dhanka goolasha ka badan gobolka Shabeelada Dhexe .
Ciyaaraha Bari dhicidoonana waxaa ay kala yihiin
Baay v Galgaduud
Sanaag vs J. Hoose
Waxii Faahin ah ama sawiro ah Kala soco Allcaseyr.net.